Nagu saabsan - Hongyuan Wheel Group Co., Ltd.
Kooxda Wheel Hongyuan
Khadka Wadada Wadada Wadarta Warshadaha Soosaarka Warshadaha
Kooxda Hongyuan Wheel Group (HYWG) waxaa la aasaasey sanadkii 1996 iyada oo ay ka horeeyeen sidii Anyang Hongyuan Steel Co., Ltd (AYHY). HYWG waa soo saare xirfadle ah birta birta ah iyo qarka oo dhameystiran dhammaan noocyada mashiinnada waddada ka baxsan, sida qalabka dhismaha, mashiinnada macdanta, forklifts, gawaarida warshadaha.
Ka dib 20 sano horumar joogto ah, HYWG wuxuu noqday hogaamiyaha caalamiga ah ee birta birta ah iyo cirifka suuqyada dhameystiran, tayadeeda waxaa cadeeyay OEM Caterpillar, Volvo, John Deere iyo XCMG. Maanta HYWG waxay leedahay hanti ka badan 100 milyan oo doolar, shaqaale 1100 ah, 5 xarumood oo wax soo saar si gaar ah loogu talagalay OTR 3-PC & 5-PC rim, forklift rim, geeska warshadaha, iyo birta birta ah.
Awoodda wax soo saar sanadle ah waxay gaartay 300,000 oo gees, alaabada loo dhoofiyo Waqooyiga Ameerika, Yurub, Afrika, Australia iyo gobollada kale. HYWG hadda waa soosaaraha ugu weyn ee OTR ee Shiinaha, wuxuuna ujeedkiisu yahay inuu noqdo soo saaraha 3 OTR rim ee adduunka.
Asal ahaan shirkad yar oo soo saarta birta, HYWG waxay bilowday inay soo saarto birta birta ilaa dabayaaqadii 1990, 2010 HYWG waxay noqotay hogaamiyaha suuqa ee biraha xamuulka qaada iyo birta OTR, saamiga suuqa wuxuu gaadhay ilaa 70% iyo 90% Shiinaha; birta caaga ah ee loo yaqaan 'OTR rim' ayaa loo dhoofiyey soo saarayaasha qarfaha adduunka sida Titan iyo GKN.
Laga soo bilaabo 2011, HYWG waxay bilaabeen inay soo saaraan qashinka OTR oo dhameystiran, waxay noqotay shirkad weyn oo wax soo saare u ah caalamiga OEM sida Caterpillar, Volvo, John Deere iyo XCMG. Laga bilaabo 4 ”ilaa 63”, laga bilaabo 1-PC ilaa 3-PC iyo 5-PC, HYWG waxay soo bandhigi kartaa badeecooyin gebi ahaanba ka kooban oo daboolaya qalabka dhismaha, mashiinada macdanta, gaariga warshadaha iyo forklift. Laga soo bilaabo birta birta ilaa qarka dhammaystiran, laga bilaabo cirifka ugu yar ee loo yaqaan 'forklift rim' illaa midka ugu weyn ee macdanta, HYWG waa Off The Road Rim All Industry Chain Manufacturing Enterprise.
Fnoocyo kala duwan oo alaab ah
Waxaan soo saari karnaa dhammaan noocyada qararka OTR oo ay ku jiraan 1-PC, 3-PC iyo 5-PC rimuhu. Cabirka 4 "ilaa 63" ee qalabka dhismaha, mashiinada macdanta, forklifts, iyo gawaarida warshadaha.
Chain Warshadaha oo dhan
HYWG waxay soosaaraysaa biraha qarka iyo geesaha oo dhameystiran, waxaan ku soo saarnaa wax walba oo guriga gudihiisa ku yaal dhammaan qarka ka hooseeya 51 ”.
Tayo la caddeeyay
Wax soo saarka HYWG waxaa si buuxda u tijaabiyey oo cadeeyey macaamiisha waaweyn ee OEM sida Caterpillar, Volvo, John Deere iyo XCMG.
R & D adag
HYWG waxay leedahay khibrad hodan ah oo ku saabsan qaabeynta iyo xakamaynta tayada alaabta, alxanka iyo rinjiyeynta. Shaybaarkayaga baaritaanka iyo software-ka FEA ayaa horumarsan xagga warshadaha.
Macaamiishayada Muhiimka ah
Waxaan u adeegsannaa mashiinno alxamid heer caalami ah oo leh nidaam kontaroolo semi-otomaat ah si loo hubiyo tayada alxanka sare iyo mid deggan. Waxaan sidoo kale soo bandhignay is-dhexgal qoto dheer oo u dhexeeya salka rim, flange iyo marin biyoodka si loo helo tayada alxanka aan laga adkaan.
Khadkeenna elektaroonigga ah wuxuu bixiyaa lakabyada ugu wanaagsan ee ra'iisul-wasaaraha kaas oo la kulma kumanaan saacadood oo tijaabooyin ka-hortagga miridhku ah, midabka iyo ranjiga ayaa u muuqda mid la kulmaya heerka ugu sarreeya ee OEM sida CAT, Volvo iyo John Deere Waxaan ku soo bandhigi karnaa awood iyo rinji qoyan labadaba rinji sare, waxaa jira in ka badan 100 nooc oo midabbo ah oo la doorto. Waxaan shirkad la leenahay shirkadaha keena ranjiyeyaasha sare sida PPG iyo Nippon Rinjiga.
HYWG waxay ahayd shirkada hogaamisa warshadaha OTR rim ee laxiriira tikniyoolajiyadda, waxsoosaarka iyo tijaabinta. Waxaa jira in ka badan 200 oo walxaha injineernimada ah oo ka mid ah wadarta guud ee shaqaalaha 1100 ee ku hawlan horumarinta, wax soo saarka iyo taageerada farsamada ee qaybta birta, birta birta ah iyo alaabada dhammaystiran
HYWG waa xubin muhiim ah oo ka tirsan Guddiga Qaranka ee Mashiinnada Dhulgariirka, ayaa bilaabay oo ka qayb qaadanayay aasaasidda heer qaran oo heerkiisu sareeyo OTR. Waxay leedahay in ka badan 100 shatiyada hal-abuurka qaran, iyo shahaadooyinka ISO9001, ISO14001, ISO18001 iyo TS16949.
Qalabaysan FEA (Finite Element Analysis) oo qalabaysan ayaa softiweer ka dhigaya qiimeynta naqshadeynta marxaladda hore suurtagal, tijaabada ladagaalanka miridhku, dheecaanka soo daatay, baaritaanka xiisada alxanka iyo qalabka tijaabada maadada ayaa HYWG iska leh awooda tijaabada ee warshadaha.
Kooxda Hongyuan Wheel Group waxay ka furatay warshad cusub magaalada Jiazuo Henan qararka warshadaha iyo forklift.
Kooxda Hongyuan Wheel Group waxay heshay GTW oo ahaa xirfadle soo saare khafiif ah oo qarka ufuran.
Kooxda Hongyaun Wheel Group waxay ka furatay dhamaadka warshad OTR qarkiisa magaalada Jiaxing Zhejiang.
Shirkadda Hongyuan Wheel Group waxay ka furatay warshaddii ugu horreysay ee OTR khafiifka ah Anyang Henan.
Shirkadda birta ah ee 'AnYang Hongyuan' waxay bilaabeen inay soo saaraan birta khafiifka ah iyo birta OTR.
Muddo 20 sano ah oo horumar isdaba joog ah HYWG uu noqday soo saaraha ugu weyn ee OTR ee Shiinaha, 10-ka sano ee soo socota HYWG waxay higsaneysaa inay noqoto Top 3 OTR rim soo saaraha adduunka. Waxaan dhiseynaa si aan u noqono Shirkad Ka Shaqeysa Soosaarka Silsiladaha Wadada Wadada Wadada ah.
Ka noqo mid caalami ah meesha calaamadda hoggaamineysa cirifka waddada.
U samee qiyam macmiilka, u samee dareenka lahaanshaha shaqaalaha, qaado mas'uuliyadda bulshada.
Hawl-karnimo, sharaf iyo daacadnimo, iskaashi guul-wadaag ah.
Qaar Ka Mid Ah Mashaariicda Macaamiisheena
Kaqeybgalay bandhigga taayirrada Cologne ee 2018 ee Jarmalka.